Vaovao - Misy fahasamihafana ve eo amin'ny sarimihetsika POF sy ny hafanana mihena?
Misy fahasamihafana ve eo amin'ny sarimihetsika POF sy ny hafanana mihena?
Misy fahasamihafana ve eo amin'ny sarimihetsika POF sy ny hafanana mihena? Ny POF dia midika hoe horonantsary mihena hafanana. Ny anarana fenon'ny POF dia antsoina hoe sarimihetsika multi-layer co-extruded polyolefin heat shrinkable film. Mampiasa polyethylene ambany hakitroka toy ny sosona afovoany (LLDPE) sy co-polypropylene (PP) ho toy ny sosona anatiny sy ivelany. Izy io dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fametahana plastika sy fivoahana avy tao amin'ny masinina, ary avy eo dia nandalo dingana manokana toy ny famoronana die sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny anarany amin'ny teny anglisy dia Polyole fin. Amin'ny ankapobeny, ny sarimihetsika mampihena hafanana dia POF, na Polyole fin Shrink Film.
1. Ho an'ny sakafo mangatsiaka, lava kokoa ny fotoana fitehirizana.
2. Fifanentanana sy fanamafisana matanjaka.
3. Miaraka amin'ny fiasan-doko.
4. Manana gloss sy mangarahara faran'izay avo.
5. Amin'ny hafanana ambany dia fohy dia haingana.
6. famehezana tsara amin'ny hafainganam-pandeha. Noho ny fahaizany mifamatotra matanjaka, ny sarimihetsika mampihena dia ampiasaina amin'ny famolavolana asa tanana sy ny manodidina ny masinina.
7. Azo antoka sy tsy misy poizina: Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny horonantsary mampihena hafanana dia tsy misy poizina ary izy ireo ihany no fitaovana fonosana maitso voamarina any Etazonia.
8. Fifanentanana tsara: ialao ny fiantraikan'ny entana fonosana amin'ny alàlan'ny hery ivelany, ary mitana andraikitra amin'ny fiarovana ireo entana fonosana. Ny vidin'ny fonosana dia ambany, ary ny kalitao ambany.
9. Taham-pihenam-bidy avo lenta: ny tahan'ny fihenan'ny sarimihetsika mampihena hafanana dia mety hahatratra hatramin'ny 75%, izay mety amin'ny fonosana iraisan'ny entana marobe, izay mety amin'ny fitaterana. Ary afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fihenan'ny entam-barotra samihafa.
10. Fanoherana mangatsiaka mahery: na dia eo ambanin'ny toe-piainana minus 50 degre Celsius aza dia tsy hiova ny toetra ara-batana, noho izany dia mety amin'ny fonosana sy fitaterana sakafo mangatsiaka.
Ny sarimihetsika hafanana mihena PVC dia mety amin'ny filan'ny entana amin'ny indostria isan-karazany. Azo ampiasaina amin'ny fonosana fanangonana tokana na kely, na fonosana lovia lehibe. Azo ampiasaina amin'ny paositra, kilalao, lamba, vokatra vita amin'ny taratasy, zava-pisotro, fanafody, fonosana hafanana hanafenana ny gorodon'ny lela sy havoana, fitaovana enti-miasa sns. Ilay horonan-tsary mampihena hafanana no be mpampiasa indrindra ary mamolavola haingana ny fihenan'ny tontolo iainana. sarimihetsika amin'ny tontolo tena izy.
Izy io dia manana mangarahara avo, mampihena be, henjana avo, fampisehoana famehezana hafanana avo lenta, fanoherana ny hatsiaka, fihenan'ny delestazy malefaka azo antoka sy azo antoka. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fonosana ivelany sy ny fonosana iraisana amin'ny indostria maro toy ny sakafo, kosmetika, fanomezana, fanafody, fitaovam-pitaterana, kilalao, vokatra audio-visual, elektronika, fitaovana plastika, kojakoja ilaina isan'andro, sns. Mety amin'ny semi-automatique ary milina fonosana mandeha ho azy tanteraka.
Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Mitete Film Pvc, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Temperature famonosana polyolefin,